गरे के हुँदैन् ! भाईरल बन्यो अस्ट्रेलियामा पुगेका युवाको सफलताको कथा (फोटो/भिडियो) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
गरे के हुँदैन् ! भाईरल बन्यो अस्ट्रेलियामा पुगेका युवाको सफलताको कथा (फोटो/भिडियो)
प्रकाशित मिति: २७ पुष २०७५, शुक्रबार January 13, 2019
असनेपालन्युज ,सिड्नी । विदेश पुग्ना साथ सुकिला मुकिला फोटोहरू सार्वजनिक गर्ने आजको भीडमा एक युवा ले नयाँं उदाहरण पेश गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा रहनु भएका नेपाली युवा सरोज भट्टराईले आफुले पार गरेका दु:ख र संघर्ष र सफलताका का सबै तस्वीर सामाजिक सन्जालमा प्रस्तुत गरेर यस्तो उदाहरण बन्नु भएको हो । आफु सफल हुना साथ आफुले पार गरेको दु:ख बताउंनै हुंदैन भन्ने आजको समाजलाई उहांको सन्देश एक चुनौति र शिक्ष्या बनेको छ ।
अस्ट्रेलियामा प्रवेश गरे देखिकै अनेक संघर्षका कथा उहांको तस्वीरले बोलेका छन्। शौचालयको सफाइ देखि शैक्षिक परामर्श दाता एजेन्सिको नेर्देशक सम्मको यात्राहरू फोटोमा सजिएका छन्। उहांको अनुहार पुस्तिकाको सन्देश यति वेला यहि सन्देश का कारण भाईरल बनेको छ । यसले पनि समाज जता बगे पनि दुनियाँं सत्य र यथार्थलाई नै पूजा गर्न रुचाउंछ भन्ने दर्शाएको छ ।
असनेपालअन्युज सँगको एक कुराकानिमा सरोज भन्नु हुन्छ “मैले कुनै ठुलो सफलता हांसिल गरें भनेर यो पोस्ट गरेको होइन , बरु यसले नव आगन्तुक लाई धैर्यता गर्न प्रेरणा मिल्नेछ भनेर हो । ” भद्र स्वभावका सरोज भन्नुहुन्छ “आफुले गरेको दु:ख लुकाएर नक्कलि सुख देखाउंदा आँफैलाई असन्तुष्टि हुन्छ र समाजमा देखा सेखि मात्र बढ्छ । त्यसैले मैले यथार्थतालाई वाहिर ल्याएको हुँं , सबैलाई भन्छु , मेहनत गर्दै जानोस् , कामलाई सानो ठुलो नभन्नुहोस् , अवश्य दिन फर्कनेछ “।
उहांको भनाइ आफ्नै शब्दमा यो भिडियोमा यसरी बग्छ ।